Fampielezan-kevitra mialohan’ny fotoana : Tokony hazava ny lalàna hoy ireo fiarahamonim-pirenena -
AccueilRaharaham-pirenenaFampielezan-kevitra mialohan’ny fotoana : Tokony hazava ny lalàna hoy ireo fiarahamonim-pirenena
04/07/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Tsy mipetraka mazava ny lalàna mikasika ny fampielezan-kevitra raha ny eto Madagasikara no resahina, satria taorian’ny famoahana ny datim-pifidianana, eny na dia efa nisy nahatsikaritra aza ny fanatanterahana fifidianana amin’ity taona ity dia efa nandeha ny hitsin-dalana. Raha ny atao hoe fampielezan-kevitra no hazavaina fohy dia eo ny fanentanana ny olona hifidy ilay kandida, na mampiasa ilay teny hoe « fidio aho » miampy ny fanazavana ny programan’asan’ilay kandida ihany koa, ny fampielezan-kevitra mialohan’ny fotoana kosa dia tsy ahitana ireo tranga roa ireo. Tsara ny manamarika eto fa tafiditra anatin’ny fampielezan-kevitra ihany koa ny filaza hoe aza fidiana ny kandida izatsy na izaroa. Raha ny fanazavana izay nomen’ny teo anivon’ny CENI amin’ny alalan’ i Thierry Rakotonarivo dia «mbola tsy misy hatreto ny lalàna mamaritra ny atao hoe fampielezan-kevitra mialohan’ny fotoana na dia efa nangataka ny handinihana izany aza ny CENI. Ny tokony ho ao anatin’ io lalàna io dia ny hoe firy volana alohan’ ny fampielezan-kevitra no tanterahina izany, ary inona no azo atao sy ny tsy azo atao » hoy hatrany ny fanazavan’ny filoha lefitry ny CENI.
Na dia eo aza anefa izay tsy fahampiana izay dia tokony hanaja sy hifanaja ny kandida rehetra, ary tokony tsy hamitaka ireo malagasy, satria ny fangalarana fotoana mialoha na tsy misy aza ny lalàna dia manome endrika tsy fahatokisan-tenan’ilay kandida, ka lasa miainga manatanteraka fampielezan-kevitra mialohan’ny fotoana ilay kandida. Ireny kandida ireny mantsy aorian’ny fitsidihany faritra maro samihafa dia matetika tsy hevitra intsony no hazavainy rehefa tonga ny fotoana, fa fanambazana ireo malagasy sahirana amin’ny vary iray kapoaka sy ny akanjo misy ny sarin’ilay kandida, satria ho an’ny any ambanivolo dia vaovao ireny akanjo ireny. Tsy voalaza anatin’ny lalàm-pifidianana moa ny fandrarana fizarana vary sy akanjo io satria mba fotoana hihinanana kely indrindra ho an’ireo sahirana, nefa dia fitaka ary manakona ny tena maha olona ilay kandida.
Noho izany dia sarotiny ary niaka-peo ny fiarahamonim-pirenena manoloana ny zava-misy tahaka izao, indrindra ny tsy fisian’ny lalàna mifehy ny fifidianana mialohan’ny fotoana. Ho an’ ny fiarahamonim-pirenena izay nanontaniana toa ny ROHY dia nilaza izy ireo fa tokony hisy ny lalàna izay mifehy ny fifidianana alohan’ ny fotoana, satria dia lasa misy fanararaotana ho an’ireo kandida izay manana ho enti-manana. Ny ROHY rahateo dia nilaza fa izy ireo dia manana volavolan-dalàna azo atolotra mikasika ity fampielezan-kevitra mialohan’ny fotoana ity. Midika izany fa mila fehezina ireo kandida sasany noho ny tsy fahatongavan-tsainy sy ny fanararaotana izay misy amin’ izao fotoana izao, dia azo lazaina fa ho tahaka izany ihany koa izy ireo rehefa tonga eo amin’ilay toerana. Noho izany dia anjaran’ ny malagasy rehetra no mijery ifotony ny mikasika ireo kandida izay tsy manaja ny hafa na tsy misy aza ny fitsipika, satria ny fifanajana asehon’ ny kandida iray dia afaka ahitana soritra ny mety ho fanajan’ilay kandida ihany koa ireo izay nifidy azy.
Andry Rajoelina : Hafaliana ho azy ny fahavoazan’ny hafa
Nihoby ny fahamaizan’Antananarivo ny TGV ny taona 2009. Nikatso tanteraka ny fampandehanan-draharaha rehetra nanomboka ny 26 Janoary 2009 noho ny tahotra sy horohoro, kila forehitra avokoa izay rehetra nolalovan’ny TGV. Tsy niandry ela ny tso-drano ...Tohiny